Photo – Myanmar
သင်မမြင်ဖူးသေးတဲ့ အတိတ်က စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ပုံရိပ်များ
စင်ကာပူမှာနေထိုင်တဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာ လွီဟောက်ဆန်းကတော့ သူရိုက်ကူးထားတဲ့ အတိတ်ကစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ လွီဟောက်ဆန်းကတော့ စကာၤပူနိုင်ငံရဲ့ လူနေမှုပုံစံတွေကို ပုံဖော်လာခဲ့တာ နှစ်၅၀ ကျော်ရှိခဲ့ပြီလို့လဲသိရပါတယ်။ လွီဟောက်ဆန်းကတော့ ယခုဆိုရင် အသက် ၈၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး သူမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ စကာၤပူနိုင်ငံရဲ့ ပုံရိပ်တွေဟာဆိုရင် နှောင်းလူတွေအတွက်တော့ လေ့လာစရာတစ်ခုပါပဲ။အခုဆိုရင်တော့ စကာၤပူနိုင်ငံဟာ သူရဲ့ပုံရိပ်တွေထဲကနဲ့ […]
ဘဝရဲ့အပျော်ရွှင်ရဆုံးနေ့ရက်မှာ ဘယ်သူကမှအသက်ကိုအရဲစွန့်ပြီး ဓာတ်ပုံမရိုက်ချင်ကြပါဘူး ။ သို့ပေမဲ့လည်း တရုတ်နိုင်ငံက စုံတွဲတစ်တွဲကတော့ မှန်တံတားရဲ့အောက်ဖက်မှာ ကြိုးလေးနဲ့တွဲလောင်းချည်ပြီး လေထဲမှာမင်္ဂလာဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ် ။ မြေပြင်ရဲ့အထက် 590 ပေမြင့်မားပေမဲ့ အဆိုပါစုံတွဲကတော့ အပြုံးမပျက်ဘဲမင်္ဂလာဓာတ်ပုံရိုက်နေခဲ့ကြတာပါ ။ မှန်တံတားတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နေရာအတော်များများမှာ ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ၊ သွားရောက်လှည်ပတ်ကြတဲ့ ရေပန်းစားလွန်းတဲ့နေရာတွေအဖြစ်လည်း ရှိနေပါတယ် ။ […]
မြင်ရသူတိုင်းကို ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားစေခဲ့တဲ့ ထူးထူးခြားခြားစပါးစိုက်ခင်းများ
လတ်တလောလူမှုကွန်ယက်မှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက ထူးခြားမှုတွေနဲ့ စပါးစိုက်ခင်းတွေကတော့ မြင်ရသူ ပရိသတ်တွေကို ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားစေတဲ့အထိ အံ့သြမှင်သက်မှုတွေ ပေးစွမ်းလျက်ရှိပါ တယ်။ အဆိုပါ စပါးစိုက်ခင်းတွေဟာ အရမ်းကို အရမ်းကိုလက်မြောက်တဲ့ ပန်းချီကားတွေကို ပုံဖော်ထားတာ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုတွေကို သိမ်းကျုံးရယူနိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့ အဆိုပါ စပါးခင်းတွေကတော့ […]
အိန္ဒိယမှာ ယောကျ်ားလေးတွေအချင်းချင်း လမ်းသွားရင်း လက်တွဲထားရတဲ့အကြောင်းရင်း
ဓာတ်ပုံဆရာ Vincent Dolman က အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ အလည်ပတ်ရောက်ရင်း လမ်းမတစ်လျှောက် တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အရာတွေကိုဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးပြီး မှတ်တမ်းစုယူခဲ့တယ်။ လန်ဒန်မှ celebrity နဲ့ ဖက်ရှင်ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူဟာ သူများနိုင်ငံတွေက ဓလေ့ရိုးရာတွေကို မှတ်တမ်းယူ ရိုက်ကူးဖို့အတွက် စိတ်အားထက်သန်ခဲ့တယ်။ အိန္ဒိယမှာတော့ ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲ ယောကျ်ားအချင်းချင်း […]
1. The North Queensferry Lighthouse in Scotland 2. The Riverside House in Japan 3. The Flatiron Building in Portland 4. The Prince Edward Island Library […]
လူအများကိုဖမ်းစားသွားတဲ့ ထိုင်းစုံတွဲတစ်တွဲရဲ့ အားကျစရာ pre wedding ပုံရိပ်
ယခုလိုပွင့်လင်းမြင်သာလာတဲ့ခေတ်ကာလမှာ လက်ထပ်တော့မယ့်ဇနီးမောင်နှံတွေအနေနဲ့ pre wedding ဓာတ်ပုံလေးတွေကို idea ကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ရိုက်ကူးလာတာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ တစ်သက်မှာ တစ်မင်္ဂလာဆိုသလို တစ်ခါသာရိုက်ကူးခွင့်ရတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို အများအားကျစရာဖြစ်အောင် ရိုက်ကူးရတာလေးကတကယ်ပျော်ရွှင်စရာလေးတစ်ခုပါပဲ။ ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာလဲ ဘယ်လောက်ထိပျော်ရွှင်ရမလဲဆိုတာကတော့ တွေးကြည့်တာနဲ့တောင်ကြည်နူးစရာကောင်းလှပါတယ်။ အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကလည်း ထိုင်းစုံတွဲတစ်တွဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ pre wedding ပုံရိပ်တွေကလဲ ပရိတ်သတ်တွေကြား အရမ်းလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါမှာလဲ […]
ပြိုင်ကားမောင်းသမား တစ်ယောက်ဟာ Formula E ကားမောင်းပြိုင်ပွဲ မတိုင်မီ သာမန်နဲ့ မတူ တမူ ထူးခြားတဲ့ စတန့် ထွင်မှု တစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကုန်းပေါ်မှာ အမြန်ဆုံး သတ္တဝါလို့ သတ်မှတ်ခြင်း ခံထားရတဲ့ ကျားသစ်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မောင်းခဲ့တာပါ။ သူ့နာမည်ကတော့ Jean-Eric Vergne […]
စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ကြောင်းကို လူငယ်များက ဆန်းသစ်တီထွင်တဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ နေရာအနှံ့မှာ ငြိမ်း ချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ Generation Z ရဲ့ ဆန်းပြားတဲ့ ဆန္ဒပြနည်းတွေကို လူမှုကွန်ရက် Facebook မှာတင်မကဘဲ နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတချို့ကတောင် ဖော်ပြလာကြပါတယ်။
သံချောင်းအိပ်ရာပေါ်အိပ်ပြီး ဆိုင်ကယ် အစီး ၇၀ ဖြတ်မောင်းခံကာ ဂင်းနစ်စံချိန်တင်သူ
ကနေဒါစတန့်သမားတစ်ဦးဟာ သံချောင်းအိပ်ရာပေါ်မှာ ပက်လက်အိပ်ပြီး သူ့အပေါ်ကို မော်တော်ဆိုင်ကယ် အစီး ၇၀ ဖြတ်မောင်းစေကာ ဂင်းနစ်စံချိန်တင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံ၊ ဗန်ကူးဗားမြို့မှာ အခုလိုအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ စတန့်ပြကွက်ကို အော်ဘတ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ စတန့်သမားက အများရှေ့မှာ လုပ်ဆောင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင်တော့ အော်ဘတ်စ်ဟာ သံချောင်းအိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်ပြီး ၂ မိနစ်အတွင်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်အများဆုံးဖြတ်မောင်းခံနိုင်သူဆိုတဲ့ […]
(၂၄)နာရီအတွင်းမှာ တစ်မြို့လုံးပျက်သွားနိုင်လောက်အောင် ထင်မှတ်မထားတတ် ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီပုံတွေကတော့ မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်းမှာတင် မျက်စိရှေ့မှာ ရှိသမျှအရာတွေက ချက်ချင်းပြိုလဲပျက်စီးသွားနိုင်တာကို သက်သေပြနေပါတယ်။ (၁) စိန့်ဟယ်လန်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရှိ စိန့်ဟယ်လန်မီးတောင်ဟာ (၁၉၈၀)ခုနှစ်ရဲ့ နွေဦးတုန်းက ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ချော်ရည်တွေ၊ ကျောက်တုံးတွေနဲ့ ဓာတ်ငွေ့များစွာပေါက်ကွဲထွက်လာမှုကြောင့် မီးတောင်တစ်ဝိုက်ပတ်ဝန်းကျင်ကို လုံးဝပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။ (၂) ဆာဟာရသဲကန္တာရအပူချိန်ကွာခြားမှု […]